Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Caribbean » Caribbean United na St. Vincent ya na Jamaica's Minister of Tourism Minister na-ebute ụzọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Safety • Saint Vincent na Grenadines na -agbasa akụkọ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Onye Minista na-ahụ maka njem nleta na Jamaica, bụ Hon Edmund Bartlett, na-akpọ ndị isi njegharị na mpaghara ahụ ka ha zukọta maka ịtụle mmetụta mgbawa mgbawa na nso nso a na agwaetiti St. Vincent na Grenadines (SVG) nke dị na Eastern Caribbean.
Ọtụtụ puku ndị bi na-ehi ụra na ebe mgbaba mberede kemgbe Fraịde [Eprel 9, 2021] mgbe a kpọpụrụ ha. Ndị ọrụ mberede akọwala ala ahụ dị ka "mpaghara ọgụ" ma kwuo na mmebi na mbibi ọzọ nwere ike ịdị
Ndị otu Global Travel and Tourism Resilience Council n'usoro ịchịkọta nkwado maka SVG site na netwọk mmekọrịta nke mba ụwa.
Minista na-ahụ maka njem nleta na Jamaica bụ Edmund Bartlett kwuru, sị: "Ngbagha nke ịdị ukwuu a na-achọ mkparịta ụka ngwa ngwa na ndị isi na-ahụ maka njem nleta na mpaghara iji nyochaa ihe ndị njem njem Caribbean nyere n'ihi mmetụta ọjọọ nke a na-enwe na ndụ, ibi ndụ na n'ikpeazụ njem," ka Minista Bartlett kwuru.
St. Vincent na Grenadines 'Prime Minister, Dr Ralph Gonsalves, nyere iwu ka a kpọpụ ya na Mpaghara Uhie na Tọzdee na ugwu mgbawa nke La Soufriere gbawara na Friday.
“N’ime ikike m dị ka Onye isi oche nke Organizationtù Ọkwa dị elu nke Statestù Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ọchịchị nke America, akpọtụwo m thetù Njem Nleta Worldwa nke Mba Ndị Dị n’Otu na Traveltù Na-ahụ Maka Njem Nleta Nationswa nke Mba Ndị Dị n’Otu na World Travel and Tourism Council banyere mkpụlata mkpụmkpụ.
Anyi nọkwa na usoro nke ịkwado nkwado maka SVG site na ndị ọrụ mmekọrịta mba anyị na-enwete njem nlegharị anya, “Mịnịsta Bartlett kwuru.
Nkwado a na-enubata maka St. Vincent na Grenadines ka ezinụlọ na-aga n'ihu na-ejikwa mmetụta mgbawa na-aga n'ihu. Ulo nke gafere agwaetiti ahụ, nke nwere ihe dị ka 110,000, ejirila uzuzu na-acha ọcha na mpekere nkume.
Minista Bartlett kwukwara, "Oge ị ga-eme bụ ugbu a ịhazi ụzọ n'ihu gụnyere iwulite ụlọ iji nwetaghachi ike ma nwekwaa ọfụma, na ebe a bụ Global Resilience Resilience na Crisis Management Center nwere ike inye aka."
Executive Director nke Global Tourism Resilience na Crisis Management Center, Prọfesọ Lloyd Waller kwukwara, "Mgbaghara ndị a abụghị ihe ọhụụ ma yie ka ọ na-eme ngwa ngwa na oke mbibi ka ukwuu. Anyị kwesịrị imekọ ọnụ maka ịga n'ihu ọkachasị dịka mpaghara dabere kpamkpam nke ndị njem.
Maka ozi ndị ọzọ kọntaktị
Prọfesọ Lloyd Waller, Executive Director, GTRMC